Umlingo wesempumalanga: Imihlobiso yeJerusalema i-Bazar ngezindugu zase-Ural
I-bazaar yaseJerusalema ingumgcinimafa we-Israel capital, owawuthola umoya onobucwebe nombala womuzi wasendulo. Ngisho noma ungakaze ugijime emigwaqweni emincane emakethe enkulu yamaJuda - akunandaba: Ukuhlobisa i-Bazar yaseJerusalema kuzokutshela okuningi ngezwe elithenjisiwe kanye nezimfihlo zalo.
Izithombe zentuthuko yezintandokazi zasentwasahlobo kwiwebhusayithi yomkhiqizo
Umsunguli womkhiqizo, u-Tanya Lieberman, akesabi ukwelapha imigomo enhle futhi ayisebenzise. Intombazane yanquma ukuhlanganisa umqondo weSlavic noMpumalanga ube uhlobo lwe "itshe lefilosofi" - ukugxila kobuhle nengokomoya okwakhiwa ngezinto ezihle ze-brand. Ukushisa okukhangayo kwamagugu a-Ural aqhakazile, okubekwa ngokucophelela ngesiliva, ithusi nethusi, kuba ngaphezu nje kokuthola izinto - kunalokho, umsizi owenza ukushisa futhi unike amandla angokomoya.
Amabhukwana anamagugu - ukuvelela okukhulu kwesithombe sikaKazze
Ithimba lokudala lomkhiqizo lidala izinto eziyingqayizivele: ukuzenzisa kwamatshe amaningi asempumalanga nama-crystal kufana ngokuhambisana nama-laconic metal izinhlobo zamacici, namasongo nemigexo. I-openwork ligature yokudweba nokukhipha ngempumelelo igcwalisa i-asymmetry ngamabomu amatshe ayigugu. Phakathi nendawo - i-turquoise ehloniphekile, i-beryl ye-tender, i-amethyst ekhanyayo nge-zircons, futhi-ke, i-quartz e-pink efashini. Vumela ukuhlobisa kukuthinte - i-Jerusalem bazaar ngeke ishiye noma ubani ngaphandle kwesipho.
Ubucwebe besiliva ngamakhadi amnyama - ngezimo ezingavamile
Ukuhlobisa okucwebeziwe ngegagasi eliyigugu - kubafundi be-minimalism
I-Pearl yakudala: izitayela zemfashini-2017
Ukuqoqwa kwamawashi Apple Hermes Watch: High fashion kanye nobuchwepheshe eliphezulu
I-jewelry psychology: umhlobiso ophelele we-psychotype yakho
Imihlobiso evunyelwe ikhodi yokugqoka
Imithetho yokunakekela izinwele, isikhumba, izipikili
I-prokhor Shalyapin ihlala eSochi nomlobokazi omusha osetshenzisiwe, isithombe
Izimbangela, imiphumela kanye nokwelashwa kokudla ngokweqile
Isinkwa sePear ngamanothi nama-cranberries
Indlela yokukhetha ifriji yokuthembeka
Kufanele indoda ivulele owesifazane imizwa yakhe
Izinzuzo zamafutha enkukhu nenyama
Ukuqiniswa kwe-eyelashes nokukhula
Ukukhokhwa kwe-alimony ngemuva kwesahlukaniso
UKsenia Sobchak usolwa ngokubulala uMaxim Vitorgan
Jamu kusuka kulamula
Indlela yokukhohlisa intombazane ukuba ifike ngosuku
Okungaxhunyiwe kwamagagageni ama-grey: Ama-backpacks we-Madeindreamland
Ukunyatheliswa okunamatheksthi - umkhuba wesimo sehlobo-2016
USvetlana Bondarchuk okokuqala wakhuluma ngehlukaniso lakhe